आईपीएलमा दिल्ली र पञ्जाव भिड्दै, सन्दीप पर्लान त टिममा ? | | Neplays.com
By Neplays	 Last updated Sep 20, 2020
इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएल अन्र्तगत आज दिल्ली क्यापिटल्स र किंग्स इलाभेन पञ्जाव भिड्दै छन् । कोरोना महामारीका कारण युएईमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको खेल पनि राति पौने ८ बजेदेखि नै शुरुहुने छ । रविचन्द्रन आश्विन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, सन्दीप लामिछाने जस्ता अनुभवि स्पिनर रहेको दिल्लीले पञ्जावलाई कडा चुनौती दिने अनुमान गरिएको छ । यो सिजनको आईपीएल जित्ने टिमको रुपमा हेरिएको दिल्लीले त्यसै अनुसारको प्रदर्शन गर्नु पनि पर्ने छ ।
अहिलेसम्म दिल्ली र पञ्जावबीच २४ वटा म्याच भएकोमा पञ्जावले १४ खेलमा जित हात पारेको छ भने दिल्लीले १० खेलमा मात्रै जित निकालेको छ । पछिल्ला पाँच खेलको कुरा गर्दा पञ्जावले चार खेल जितेको छ भने अन्तिम खेल दिल्लीले जितेको थियो । पञ्जाव केएल राहुलको कप्तानीमा छ भने दिल्ली श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा रहेको छ ।
व्याटिङमा दिल्ली क्यापिटल्स सन्तुलित देखिएको छ । भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुको बाहुल्यता रहेको दिल्लीमा पृथ्वी शा, अय्यर, ऋषभ पन्त, शिखर धवनका साथै वेस्टइन्डिजका शिमरन हटमायर पनि छन् । यस्तै अजिंका रहाणे पनि दिल्लीको ब्याकअप हुन् ।
पञ्जावसँग पनि क्रिस गेल, ग्लेन म्याक्सवेल र कप्तान केएल राहुलले पनि दमदार व्याटिङ गर्न सक्छन् ।
दिल्ली टिममा कागिसो रबाडाका साथै डेनियल साम्सले प्लेयिङ ११ मा स्थान बनाउने सम्भावना रहेको छ । जसका कारण ईशान्त शर्मा भने बाहिर पर्न सक्छन् । पञ्जाव मोहम्मद शामी र मुजीब जदरानको बलिङमा भर पर्ने छ ।
सन्दीप पर्छन त ?
नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने विगत तीन संस्करणदेखि आईपीएलमा दिल्लीबाट खेल्दै आएका छन् । दिल्लीबाट आईपीएल खेलेसँगै उनको अन्य फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि सफल हुँदै गए । विश्वका अधिकांश फ्रेन्चाइज लिग खेलिसकेका सन्दीप हालै क्यारेविनय प्रिमियर लिग खेलेर युएई पुगेका छन् । क्वारेन्टिनमा रहेका सन्दीपको सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले उनी आजको खेलका लागि उपलव्ध हुने जनाइएको छ । तर तिममा पर्ने या नपर्ने कुरा भने म्यानेजमेन्टको हातमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
आईपीएलमा पञ्जाव विजयी, प्ले अफको सम्भावना कायमै
आईपीएल : गिलको अर्धशतकमा कोलकताले पञ्जावलाई दियो १५० रनको लक्ष्य